(၂၄) နာရီအတွင်း လူအယောက်ပေါင်း ၁၃၀၀ ကို COVID-19 ပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ စက် အပါ သိန်း ၈၀၀၀ ကျော် လှူဒါန်းလိုက် တဲ့ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတိကဓရ – Na Pann San
ကျပ်သိန်းပေါင်း ၈၈၅၂ သိန်း လှူဒါန်းလိုက် တဲ့ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မမဏိဇောတိကဓရ ..
ဦးဇော်မိုးခိုင်..ဒေါက်တာစောနေနွယ်…( AA-Medical Products )( Pacific-AA Group )-မိသားစု အလှူ
” AA Medical Products Ltd ကနေ COVID-19 ရောဂါရှိ မရှိ ၂၄ နာရီ အတွင်း လူပေါင်း ၁,၃၀၀ ကျော်ကိုစစ်ဆေးနိုင် တဲ့ စက်တစ်လုံး အပါအဝင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၈,၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်များ လှူဒါန်း”
ရန်ကု န် ၊ဧပြီလ – ၅ ရက်။ AA Medical Products Ltd ကနေ COVID-19 ရောဂါရှိမရှိ ၂၄ နာရီအတွင်း လူပေါင်း ၁,၃၀၀ ကျော်ကိုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ စက်တစ်လုံးအပါအဝင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၈,၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိပစ္စည်တွေကို သည်ကနေ့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို လှူဒါန်းလိုက် ပါတယ် ။
လှူဒါန်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ကျိုက်ကဆံအားကစားကွင်း၊ ပြည်ထောင်စုခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီနဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။
1. Automatic နည်းလမ်းဖြင့် တိကျမြန်ဆန်စွာ COVID-19 ရောဂါရှိမရှိ (၈)နာရီအတွင်း လူပေါင်း (၃၈၀) ကျော်၊ ၂၄ နာရီအတွင်း လူပေါင်း (၁၃၀၀) ကျော်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သော Cobas 6800 Analyser စက်တစ်လုံး (Made in Switzerland)၊
2. Cobas 6800 analyser စက်နှင့်တွဲဖက်၍ လူအယောက် (၁၁၀၀) ကျော် စစ်ဆေးနိုင်သည့် ရောဂါရှာဖွေရေးဆေးရည် Reagent (Made in USA)၊
3. အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်း (NHL) ရဲ့ Virology Lab အဆင့်မြှင့်တင်မှူလှူဒါန်းခြင်း (lab renovations including Air corn & lab fixtures/fittings)တွေကို လှူန်ဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
သည်စက်တွေဟာ US FDA မှာ မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ခွဲတမ်းရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး American နိုင်ငံမှ Frankfurt လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
US president, Indonesia president အပါအဝင် နိုင်ငံကြီးများက Roche Diagnostic ထံ လုယက်ဝယ်ယူနေကြချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ​၏ Distributor ဖြစ်သော AA Medical Products Ltd ​၏တောင်းဆိုမှူ၊ လှူဒါန်းလိုမှူကို ယုံကြည်စွာ နိုင်ငံကြီးများနည်းတူ ဦးစားပေးခဲ့ပါသော Roche Diagnostic အား၎င်း၊ လက်ခံစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသော NHL မှတာဝန်ရှိသူများအား၎င်း၊ အလှူလက်ခံပေးပါသော ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအား၎င်း၊ Covid ကာလတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှူလုပ်ငန်းများအတွက် မငြီးမငြူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသော AA Medical Products Ltd မှဝန်ထမ်းများအား၎င်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ COVID-19 အတွက် ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်လှူဒါန်းမှူ ကျပ် သိန်း (8852)သိန်းမှာ COVID-19 ရောဂါရှာဖွေ၊ ကုသရေးအတွက် အထောက်အကူတစ်စုံတစ်ရာရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
ကပျြသိနျးပေါငျး ၈၈၅၂ သိနျး လှူဒါနျးလိုကျ တဲ့ အဂ်ဂမဟာသီရိသုဓမ်မမဏိဇောတိကဓရ ..
ဦးဇျောမိုးခိုငျ..ဒေါကျတာစောနနှေယျ…( AA-Medical Products )( Pacific-AA Group )-မိသားစု အလှူ
” AA Medical Products Ltd ကနေ COVID-19 ရောဂါရှိ မရှိ ၂၄ နာရီ အတှငျး လူပေါငျး ၁,၃၀၀ ကြျောကိုစဈဆေးနိုငျ တဲ့ စကျတဈလုံး အပါအဝငျ ကပျြသိနျးပေါငျး ၈,၀၀၀ ကြျောတနျဖိုးရှိ ပစ်စညျမြား လှူဒါနျး”
ရနျကု နျ ၊ဧပွီလ – ၅ ရကျ။ AA Medical Products Ltd ကနေ COVID-19 ရောဂါရှိမရှိ ၂၄ နာရီအတှငျး လူပေါငျး ၁,၃၀၀ ကြျောကိုစဈဆေးနိုငျတဲ့ စကျတဈလုံးအပါအဝငျ ကပျြသိနျးပေါငျး ၈,၀၀၀ ကြျောတနျဖိုးရှိပစ်စညျတှကေို သညျကနေ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနကို လှူဒါနျးလိုကျ ပါတယျ ။
လှူဒါနျးပေးအပျပှဲ အခမျးအနားကို ကြိုကျကဆံအားကစားကှငျး၊ ပွညျထောငျစုခနျးမမှာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး ပွညျထောငျစု သမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော COVID-19 ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေး အမြိုးသားအဆငျ့ဗဟိုကျောမတီနဲ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနသို့ လှူဒါနျးခဲ့တာပါ။
3. အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲခနျး (NHL) ရဲ့ Virology Lab အဆငျ့မွှငျ့တငျမှူလှူဒါနျးခွငျး (lab renovations including Air corn & lab fixtures/fittings)တှကေို လှူနျဒါနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
သညျစကျတှဟော US FDA မှာ မှတျပုံတငျရရှိပွီးတာနဲ့ တပွိုငျနကျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ခှဲတမျးရနိုငျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တာဖွဈပွီး American နိုငျငံမှ Frankfurt လဆေိပျသို့ရောကျရှိနပွေီဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
US president, Indonesia president အပါအဝငျ နိုငျငံကွီးမြားက Roche Diagnostic ထံ လုယကျဝယျယူနကွေခြိနျတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၏ Distributor ဖွဈသော AA Medical Products Ltd ၏တောငျးဆိုမှူ၊ လှူဒါနျးလိုမှူကို ယုံကွညျစှာ နိုငျငံကွီးမြားနညျးတူ ဦးစားပေးခဲ့ပါသော Roche Diagnostic အား၎င်းငျး၊ လကျခံစီစဉျဆောငျရှကျပေးပါသော NHL မှတာဝနျရှိသူမြားအား၎င်းငျး၊ အလှူလကျခံပေးပါသော ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီးအား၎င်းငျး၊ Covid ကာလတှငျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှူလုပျငနျးမြားအတှကျ မငွီးမငွူတာဝနျထမျးဆောငျကွသော AA Medical Products Ltd မှဝနျထမျးမြားအား၎င်းငျး ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါသညျ။
ကြှနျမတို့ရဲ့ COVID-19 အတှကျ ပထမအကွိမျနှငျ့ ဒုတိယအကွိမျလှူဒါနျးမှူ ကပျြ သိနျး (8852)သိနျးမှာ COVID-19 ရောဂါရှာဖှေ၊ ကုသရေးအတှကျ အထောကျအကူတဈစုံတဈရာရလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ
ယနေ့ မနက် အထူးခြားဆုံး နဲ့ အကြိုက်ဆုံး ပိုစ့်လေးပါ…စိတ်ကူးလေးက ကောင်းလွန်းပါတယ်နော်
ဧပြီလ(၂၀) ရက်နေ့ အလုပ်တွေ ပြန်ဆင်းရခြင်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများ နားထောင်ရမယ့် ပြည်သူ့အသံ
ရောဂါ လက္ခဏာ မပြပဲ ကိုဗစ်တွေ့သူ (၁၂၁) ဦးရှိသဖြင့် သတိပြုနေ ကြထိုင်ရန် သတိပေး